सेवा, सेवा, ट्युनिंग | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: सेवा, सेवा, ट्यूनिंग
तेल खरिद गर्दा, कृत्रिम वा अर्ध-कृत्रिम तेल कसरी निर्धारण गर्न सकिन्छ र कसरी संकेत गर्दछ
तेल किन्दा, सिंथेटिक तेल वा अर्ध-सिंथेटिक तेल कसरी पहिचान गर्ने, कहाँ र कसरी यो स indicated्केत गरिएको छ, निर्माताको वेबसाइटमा जानुहोस्, उदाहरणका लागि, मोबाइल१ मा र मोटर तेल्सको चिह्नित जाँच मोटो तेल दुई मुख्य भागमा विभाजन गरिएको छ ...
कुनै कारण बिना, StarLine A61 अलार्ममा हुड खुल्ला अलार्म ट्रिगर गरिएको छ।
कुनै कारण बिना, स्टारलाईन ए alar alar अलार्ममा हुड खोल्ने सेन्सर ट्रिगर हुन्छ जब कुञ्जी फोबमा खुला हुड हुन्छ र प्रयोगशालामा फ्ल्यासलाइटले के गर्छ? यो पक्कै होइन ...
स्टारलाइन अलार्म !!! स्टारलाइन ए on मा त्यस्ता गन्दाहरू थिए, किचेनको पहिलो बटन प्रोग्राम गर्न योग्य छ, सम्भवतः यो यहाँ हराएको हुन सक्छ, निर्देशनहरूबाट फुटनोट प्रयास गर्नुहोस्। मुख्य किचेनको बटन १ को उद्देश्य प्रोग्राम हुन योग्य छ र आफैलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ ...
कुन कम्पनीलाई एक्सेनसन राख्ने?
कुन कम्पनीले क्सीनन आपूर्ति गर्ने? सबै भन्दा सस्तो xenon कुनै पनि halogen भन्दा steeper चम्किन्छ र तपाईं लेख्नु अघि तपाईं आफैं यो प्रयास गर्नु पर्छ। ओसराम, नर्भा, जनरल इलेक्ट्रिक, बाट राम्रो क्सीनन ...
के यो 4-स्ट्रोक स्कूटरमा ओटोमोबाइल तेल लगाउन सम्भव छ ?? यदि कुनै छैन भने ?? ??
के कार तेल4स्ट्रोक स्कूटरमा राख्न सकिन्छ ?? यदि होईन भने किन ?? होईन एक पटक प्रयोग गरियो। यो बाक्लो छ, र तपाईं यो मोटर स्लाइ inside हुँदा भित्र स्क्विश सुन्न सक्नुहुन्छ। मसँग छ ...
कार्ब केक्सनमक्स। कसरि कार्ब k36 समायोजन गर्ने
carb k36। कसरी carb k36 समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ जहाँसम्म मलाई थाहा छ यो एक पुरानो carb छुट्टै फ्लोट कोठाको साथ छ, यसलाई मोटर सवारीमा राख्नुहोस् मध्य 80० को दशक सम्म? K-36 carburetor को समायोजन तलको रूपमा गरिन्छ।
भिन्न VAZ 2106। बेंच अंतर भने के हुन्छ? के के हुनेछ र के खराब छ?
भिन्नता २१az2106। भिन्नता वेल्डेड भएमा के परिवर्तन हुन्छ? के राम्रो हुन्छ र के खराब हुन्छ? दुबै पाels्ग्राहरू निरन्तर उही दिशामा घुमाउने छन् (ब्लक गर्दै) र कार व्यावहारिक रूपमा आफैंले मोडिने छैन ...
Vaz 2107 मा हुड कसरी खोल्ने? केबल महलबाट हटाइयो! अवस्था जटिल छ!
VAZ 2107 मा हुड कसरी खोल्ने? रसल महलबाट बाहिर तानियो! अवस्था झनै जटिल भएको छ! क्लासिकमा, हुड एकदम लचिलो छ, तपाईं यसलाई ड्राइभरको पक्षबाट उठाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो हातले केबल शर्टमा पुग्न सक्नुहुन्छ (मलाई थाहा छ ...
एक अन्तरक्रियात्मक कोड स्क्यान गरिएको संग अलार्म वा होइन। कोड हडतालहरू। र यदि हां, मलाई लेख को लिंक बताओ
सम्बन्धी कोडको साथ अलार्म स्क्यान गरिएको छ वा छैन। कोड grabers। र यदि हो भने मलाई लेखको लिंक बताउनुहोस्। कारको मालिकले एक बटन थिच्दछ। केहि हुँदैन। र कोड अवरुद्ध छ ...
कसरी प्लास्टिक स्कूटर प्यान्ट गर्न सक्नु हुन्छ
तपाइँको आफ्नै हातले स्कूटरको प्लास्टिक कसरी रंगाउने भनेर पुरानो पेन्टलाई विशेष समाधानको साथ धुनुहोस् (प्राथमिकताका साथ) यदि कुल्दैन भने, बिस्तारै छालालाई छालाको साथ शुन्यमा ल्याउनुहोस्, (केही पानीको साथ, सतहलाई "एक चम्काउन" प्राइमरी विशेष प्राइमरको साथ सतह नियन्त्रण गर्दै ...
चारकोल केबिन फिल्टर कसरी सामान्य भन्दा फरक छ ?? फिल्टर अझ राम्रो ??
एउटा कोइलाको केबिन फिल्टर कसरी साधारणभन्दा फरक छ? यसले अझ राम्रो फिल्टर गर्छ? म यसलाई विश्वास गर्न सक्दिन ... किनकि उनीहरू यहाँ लेख्छन् - ट्राफिक जाममा उभिएर, शायद कोइला अझ केही राम्रो हुन्छ। - तपाईंले हावा आपूर्ति बन्द नगरेसम्म यो गन्ध आउँनेछ ...
कारमा बिजुली टर्बाइन कसले राख्यो? राम्रोसँग वा यसको बिना?
कसले गाडीमा इलेक्ट्रिक टर्बाइन राख्यो? उनीसँगै वा उनी बिना नै राम्रो? rzhu)))))))))))))))))))))))))) चिन्ता नलिनुहोस् - र तपाईं निको हुनुहुनेछ ... सबै कुरा हराउँछ ... यो मोटर्समा नयाँ छ))) प्रोसेसर फ्यानको रूपमा टरबाइन ...
एक शून्य प्रतिरोधी फिल्टर र एक नियमित हवा फिल्टर बीचको के हो?
शून्य प्रतिरोध फिल्टर र एक पारम्परिक एयर फिल्टर बीचको भिन्नता के हो? त्यहाँ ट्युनिंग केन्द्र "bilcon" को विशेषज्ञहरूको लागि केहि छैन ... एक थप भ्रम। यो विश्वास गरिन्छ कि यदि तपाईं फिल्टर र यसको आवास पूरै हटाउनुहुन्छ, मोटर शक्ति ...
कारमा के के छ?
गाडीमा एब्स के हुन्छ? म दलियाको रूपमा वर्णन गर्दछु कि केवल निल्नको लागि मात्र बाँकी छ - ताकि पा wheel्ग्रा डामरीमा जोडले समात्दैन र कार चिप्लन्छ र स्किडमा जान सक्दैन ...
एक चोरी कार मा शरीर को संख्या को कसरि मारयो? ग्राहक पहिले नै कारको लागि पर्खिरहेको छ
कसरी चोरीको कारमा शरीरका नम्बरहरू मार्ने? ग्राहक पहिले नै एक पहियाको लागि प्रतिक्षा गर्दै छ यो पहिले नै अप्रासंगिक छ ..) apupet कति चतुर ढly्गमा सेवामा उनीहरू पैसा कमाउन सक्छन्! एउटा व्हीलबरो चोरी भएको थियो, तर ...
CATALYST ले ईन्धन खपतलाई कसरी प्रभाव पार्छ ???
कसरी CATALYST काट अफ ईन्धन खपत लाई असर गर्छ ??? उपभोग बढेको तथ्यको कारणले गर्दा मस्तिष्कहरू अझ खराब मिश्रणको तयारी गरिरहेका छन्। यसैले शक्ति मा वृद्धि, र निकास को हाइड्रोलिक प्रतिरोध मा कमी को कारण छैन। यो ...
स्टीयरिंग व्हीलको बायाँमा SHIFT LOCK बटनको मतलब के हो? यो केको लागि हो?
स्टीयरिंग व्हीलको बायाँमा SHIFT LOCK बटनको मतलब के हो? यो केको लागि हो? निर्देशनहरू भन्छन् कि स्वचालित ट्रान्समिशन लीभर रोक्न सकिन्छ, त्यसपछि यस शिलालेखको साथ स्लटमा कुञ्जी टाँसिदा मद्दत गर्न सक्दछ।
स्टोव मेसिनबाट चिसो हावा उड्दै DEU Nexia कारण के हो ???
चिसो हावा स्टोभ मिसिनबाट उडिरहेको छ डीईयू नेक्सिया कारण के हो ??? उज्बेकिस्तान, वा कजाकिस्तानमा पनि उनीहरूले केहि पनि स collect्कलन गर्छन्, र त्यहाँ तातो छ, तिनीहरूलाई चुलो चाहिने छैन, ...
के यसले एन्टिफ्रिजसँग एन्टिफ्रिज मिलाउन सम्भव छ, कि इन्जिनले यसबाट उल्टाउने छैन?
के एन्टिफ्रिजलाई एन्टिफ्रिजको साथ मिक्स गर्न सम्भव छ, ता कि यसबाट इन्जिन फोक्न नपाओस्? यदि एक आधारमा, त्यसपछि तपाईं सक्दैन, तपाईं सक्दैन! यो एन्टिटोसोल हुनेछ। मोटर स्थिर हुनेछ। होईन, यो हो ...
VAZ - २११,, १. in इंजेक्टर, चिसो मा खराब शुरू
VAZ - २११,, १. in इंजेक्टर, चिसो स्पार्कको खराब सुरुवात कमजोर छ, मलाई लाग्छ। कारण तारहरु छ। त्यहाँ एक मामला थियो - चिसो तस्वीरको दौरान, क्र्याhaकशाफ्ट सेन्सरको प्रतिरोध हरायो, र इग्निशन र इन्जेक्शन क्षणहरू ...
70 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 8,197 प्रश्नहरू।